Inyanga yeSaturn, iTitan, ibukeka njengoMhlaba, kepha iyahlanya - BGR - Tamban RELAY
Accueil » ISAYENSI Inyanga yeSaturn, iTitan, ibukeka njengoMhlaba, kepha iyahlanya - BGR
Lapho i-NASA Cassini orbiter ichitha iminyaka engaphezu kwe-10 ekuzungezeni iSaturn, iplanethi ekujuleni kwenhloso yayo kwakungeyona ukuphela okuhlosiwe ngayo. I-spacecraft futhi ichithe isikhathi ichitha izinyanga zikaSaturn, kufaka neTitan. Manje njengoba ukuthunyelwa kweCassini kuyinkumbulo ekude, idatha eyithumele emuva isasetshenziselwa ukutholwa okusha.
Ngenxa yeCassini, ososayensi bakwazi dala imephu yomhlaba ye-Titan okokuqala, futhi isihloko sendatshana entsha eshicilelwe ku Nature Astronomy . Kuvela ukuthi iJogan's geography ifana kakhulu nezwekazi loMhlaba, kanye namagquma alo, izindunduma namathafa amakhulu agcwele amachibi. Isimo sezulu, ngakolunye uhlangothi, siyindathane yobusuku obuningi bempilo yasemhlabeni.
Amanzi olwelo awekho ngaphezulu kweTitan, kepha kusekhona ezinye izinto eziningi zotshwala. Emhlabeni, ama-hydrocarbons afana ne-methane akhona ikakhulukazi ngesimo segesi. E-Titan, amazinga okushisa aqandayo avumela ukuba akhona njengamanzi. Amachibi enyanga ebandayo agcwele lokhu kudla, futhi lina kusuka ezulwini njengamanzi uketshezi lapha eMhlabeni
Umbuzo wokuthi impilo kungenzeka yini kwi-Titan uyinkimbinkimbi. Ososayensi bacabanga ukuthi i-organic compounds igcwele kuTitan, okuyinto ethokozisayo, kepha izimo azifani nanoma yini esingayibona lapha eMhlabeni. Ingaphezulu leplanethi ingumbala ogcwele iqhwa, kepha abacwaningi bakholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi amanzi amanzana ageleze aze afike phansi komhlaba. Uma lokhu kuyiqiniso, ukuhlanganiswa kwamanzi okuwuketshezi kanye nezinto eziphilayo kungabhekisa ezinqubweni zemvelo ezisetshenziswayo.
"Izinto ezi-organic zibaluleke kakhulu emandleni okuphila e-Titan, iningi lethu esicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi lavela emanzini olwandle uketshezi ngaphansi kweTitan Crust yaseTitan," kusho uRosaly Lopes weJet Propulsion Laborator yaseNASA. kanye nombhali oholayo ocwaningweni. "Sikholwa ukuthi i-organic organic ingangena olwandle lwamanzi uketshezi nokuthi inganikeza izakhi zomzimba ezidingekayo empilweni uma zivela."
I-NASA njengamanje isebenza kumishini ezothumela i-drone ezindizayo eTitan. I-mission okwamanje ihlelelwe i-2026, kepha kuzothatha iminyaka eyisishiyagalombili ephelele ukuthi umkhathi ufike, ngakho-ke kuzodingeka silinde kuze kube maphakathi kweminyaka ye-2030 ukubona ukuthi inyanga izonikela ini.
Umthombo Wezithombe: NASA / JPL-Caltech / ASU